၂။ Seminar ၏ ခေါင်းစဉ်မှာ "Why do we blog?" ဖြစ်ပါသည်။
Aung Chan Lin said…
ငါ့အကိုတို့ blog times အတွက် ရယ်စရာလေး တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါယတယ် ကြိုက်သလိုဖန်တီးခွင့်ပေးသည်
Seminar ခေါင်းစဉ်ကို "Why do we blog?" အစား "Why Blog?" ဆိုတာပို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလားလို့...